Iwo Luck Bringers eTibet: Iyo Tibetan Terrier yakakunakira iwe? - Inobereka
Iwo Luck Bringers eTibet: Iyo Tibetan Terrier yakakunakira iwe?
Kazhinji inonzi 'Imbwa Dzvene dzeTibet,' inokudzwa Tibetan Terrier inonziwo Dhokhi Apso, Tsang Apso, kana TTs. Ivo vanogovera saizi yakafanana, asi kunyangwe iri zita, ivo havasi chaizvo terriers.
Iyo Tibetan Terrier ine yakaomeswa uye inonakidza nhoroondo iyo inongowedzera kune iyo kunakirwa kwakakomberedza idzi dzakachena mbichana.
Mavambo Matsvene: Iyo Tibetan Terrier
Iko Kutaridzika kweTibetan Terrier
Iyo Timid Tibetan Terrier
Kuchengeta Kweumwe Wako
Iyo Tibetan Terriers Hutano Zvinodiwa
Iyo Lhasa Apso vs. Iyo Tibetan Terrier
Tibetan Terrier Misanganiswa
Iyo Tibetan Terrier imbwa iwe here?
Kupfuurirazve Kuverenga: Mhando dzakafanana
Zvinogona kusazoshamisika kuti mavambo eTibetan Terrier anotangira muTibet.
Mamonki echiBhudha enharaunda iyi yeHimalaya akavabereka sevatariri uye shamwari makore anoda kusvika 2000 apfuura. Marudzi anongofamba-famba aishandisawo rudzi urwu rwekare mukufudza mapoka avo.
TTs yaive mhanza yakanaka, iyo yakasimbisa zita ravo rembwa dzinoyera, vakapiwa sezvipo zvekupa unogamuchira nerombo rakanaka.
Vanhu veTibet zvakare havangatengese kana kubata zvisina kunaka imbwa idzi neimwe nzira nekuti vaitenda kuti dzaizounza rombo rakaipa.
Tibetan Terriers inobatawo musiyano wekushandiswa mukuvandudza kwakawanda marudzi. Mhando dzakadai saShih Tzu, weTibetan Spaniel, uye Lhasa Apso vese vane chikwereti kuTibetan Terrier.
Vaive vafambi vekuEurope avo vakatanga kudaidza aya marombo ekuunza maTerriers nekuti vaifunga kuti akagovana zvakafanana.
Dr. Agnes Greig vakaunza rudzi urwu kuEurope muna 1922. Akapa zvipo zviviri zveTibetan zvebasa rake neWomen's Medical Service yeIndia, akavaunza kumba kuEngland.
Muna 1924, idzo imbwa, Bunti naRajah, vaive nemarara avo ekutanga, akanyoreswa seLhasa Terriers.
Iyo Lhasa Terrier kudomwa yakaramba yakamira kusvika 1930 apo iyo Kennel Club yeIndia yakachinja kuita Tibetan Terrier pavakanyora muyero wekubereka.
Dr Greig vakaramba vachishanda nerudzi urwu kumashure kuEngland, kwavakavhura Lamleh Kennel. Muna 1937, akawana rudzi rwunozivikanwa neChirungu Kennel Club.
Yekutanga Tibetan Terriers akawana nzira yavo kuenda kuUnited States muna 1956, serendipitously achiuya kuna Dr. Greig's Kennel.
Iyo Tibetan Terrier Kirabhu yeAmerica (TTCA) yakavambwa gore rinotevera. Iyo American kirabhu kirabhu (AKC) yakacherekedza rudzi irwo 'muboka risiri remitambo' muna 1973.
Iyo AKC ikozvino inozivawo TTCA seParent Club yeTibetan Terrier.
Mazuva ano, maTibetan Terriers ari kuhwina moyo zvakapusa sekuhwina kwavo kuratidzwa kwembwa. Muna 2016, uyo asiri-mutambo wekubereka mukundi weNational Imbwa Show yaive Tibetan Terrier.
Tibetan Terriers imbwa dziri pakati nepakati dzine jasi rakasarudzika. Vane misoro iri pakati nepakati ine mutserendende wakanangana nenzeve. Nzeve dzavo dzinoratidzika kunge dzakaumbwa-V uye dzakarembera padivi remusoro.
Ivo vanoratidzira yakafara-yakatarwa maziso anozove iwo mumvuri webrown, uye iwo iwo maziso achave akavharidzirwa zvishoma nebvudzi rakaturika kubva pahuma.
Imbwa iyi inobereka muromo mupfupi ine hushoma hwendebvu pazasi pezasi uye mhino nhema nhema pamuromo wayo. Ivo zvakare vane yakasarudzika kuruma iyo inogona kuve yakaenzana, chigero, kana kudzoresa chigero.
TT ine yakakura, yakatenderera, tsoka dzakapetana nemapepa makobvu anogadzira chando chando.
Tsoka dzavo dzakasarudzika uye makumbo marefu, akasimba anobvumidza kukwezva kunoshamisa uye kugona, izvo zvakauya zvakanakira munzvimbo yakaoma yeTibet. Ivo zvakare vane hind makumbo ayo akareba kupfuura avo epamberi makumbo.
Ivo vane mativi akakwirana aine chikamu chepamusoro chakadzokera kumiswe yavo yepakati kureba. Miswe yavo inokombamira kumusana, uye vanogona kutokonamira kune rimwe divi.
Iyo Tibetan Terrier inoyera sei?
Urwu rudzi rwepakati nepakati runogona kubudirira mufurati kana mumba chero bedzi ivo vachigamuchirwa kwakakodzera kurovedza muviri. Usati waunza imba yeTibetan Terrier, zvakadaro, unogona kunge uchida kuziva kuti vangakura sei.
Tibetan Terrier : Murume Mukadzi
Urefu: 14-17 inches
Kurema: 18-30 mapaundi Zvishoma Zvishoma
Tibetan Terriers inokura zvishoma zvishoma pane mamwe mazera. Zvinogona kutora pakati pemwedzi gumi negumi nemana vasati vasvika mukukura.
Kuvhara kweLuscious: Iyo TTs Coat
Iyo Tibetan Terrier ine yakasarudzika mbiri jasi. Iri jasi rakakora, riine mvere uye rakapfava. Jasi ravo rekunze rine vhudzi refu rakasarudzika rinogona kutwasuka kana kuita wavy, uye rinotsemuka nepakati nepakati pemusana wavo.
Jasi ravo refu rinowanzo kuve chimiro chavo chinozivikanwa sezvo vane vhudzi rakakura rakafukidza muviri wavo wese.
A Cornucopia Yemavara
Kana zvasvika kumuvara wejasi, maTibetan Terriers haana kuvimbika. Vanogona kuva chero ruvara kana chero musanganiswa weayo mavara.
Yakakurumbira Colors & Kubatanidzwa
Nhema Brindle Ndarama Brindle Sirivheri
Dema & Chena Brindle & Muchena gireyi Sirivha & Nhema
Dema, Muchena & Goridhe bhurawuni Grey & Chena Sirivheri & Chena
Nhema & Brindle Brown & Muchena Net chena
Dema & Bhurauni Fawn Dzvuku & Chena Chena & Nhema
Dema & Ndarama Fawn & Muchena Tsvuku Brindle Chena & Ndarama
Nhema & Chena Brindle Ndarama Saber
Dema, Bhurauni & Chena Ndarama & Chena Sable & Muchena
Kunze kweye brindle uye sable mapatani atotaurwa, imbwa idzi dzinogona kutamba dzakasiyana siyana dzakatarisana nejasi.
Iyo yakasarudzika pateni, nhema mapoinzi, nhema dema, uye nhema kana chena mamaki anogona zvese kuzviratidza ivo pachavo muchizvarwa.
Idzi dzinodakadza, dzinodakadza dzinoita shamwari huru uye imbwa dzerapi. Iwe unozoda kuve nechokwadi kuti ivo vanoshamwaridzana vechidiki nevanhu vese pamwe nedzimwe mhuka.
Pasina kudyidzana uku pakutanga kwehupenyu, maTibetan Terriers anogona kutambura nekunyara kwakanyanya. Idzowo dzinonakidza imbwa dzemhuri dzinoita zvakanaka nevana vadiki, kunyangwe kana dzichinyara kuvakomberedza pakutanga.
TTs ine hukasha here?
Tibetan Terriers haisi rudzi rwechisimba, uye vanoita zvakanaka nevamwe vanhu nezvipfuwo, kunyangwe vachigona kumira.
Izvowo haasi kunyanya kuhukura, asi anokwanisa kuburitsa kuhukura kwakadzika kuti ugare wakangwarira. Ivo vanogona zvakare kuona kupatsanurwa kunetseka, izvo zvinogona kuwedzera kuhukura kana zvikasiiwa zvega kwenguva refu.
Kudzidzisa TT kunogona kutora moyo murefu nekuti imbwa idzi dzakangwara dzinogona kuve neyakaoma musoro.
Vanogona kubudirira nekusimbiswa kwakanaka, asi kurovedzwa kunogona kutora nguva yakareba nekuti vanokura zvishoma nezvishoma kupfuura mamwe marudzi.
Kurerukirwa kwekudzidziswa kwavo kunoenderana nezvinhu zvakasiyana, senge nzira dzako uye zera ravo.
Tibetan Terriers inogona kuve yakakura yekuchengetedza mhando, asi izvo zvinonyanya kukonzerwa nezvavanoda kushambidzika.
Sekureva kwavo kwavanobva, vanogona kubudirira mukutonhorera, asi vanogona zvakare kuita zvakanaka mumamiriro ekunze anodziya. Ive neshuwa yekudzivirira kupisa kwakanyanya kana kutonhora uye mumvuri uye pekugara wako pup pazvinenge zvichidikanwa.
Kushandisa Yako Tibetan Terrier
Yako TT ichave nepakati nepakati simba simba iro rinoda zuva nezuva kurovedza muviri. Vachada kukuperekedza pakufamba kwenguva refu, kumhanya, kana kupaki imbwa, uye havazopikiswe kuseri kwemba yakanaka kumhanya uchitenderera.
Nekuti yako Tibetan Terrier imbwa yakangwara, yavo yekurovedza muviri inoda zvakare inosanganisira kusimudzira kwepfungwa.
Iyo inodzidzisa inodzidzisa regimen iyo inovabvumidza ivo kuti vanzwe kubatsira ichaita zvishamiso kune kwavo chiitiko chikamu zvese nepfungwa uye nemuviri.
Iyo Yakasimba Yekushongedza Regimen
Kushongedza yako Tibetan Terrier kunotora nguva. Vachada kukweshwa kanokwana katatu pasvondo, asi ini ndinokurudzira zuva nezuva kukwesha.
Iwe uchazoda kukanganisa jasi ravo nemvura usati watsvaira, uye iwe unogona zvakare kuwedzera inogadzirisa kune mhute kubatsira kuchengetedza yavo jasi.
Kana iwe ukasakanganisa jasi ravo usati watsvaira, vhudzi rinogona kutyoka uye kubvaruka, izvo zvingave zvisina kugadzikana kumwana wako.
Imbwa yako ichave nevhudzi pakati pezvigunwe uye pasi penzeve. Iwe unofanirwa kuchengeta iyo nzvimbo dzakashongedzwa uye dzakachena.
Kuongorora nzeve dzavo kunofanirwa kuve kwekutanga kwauri sezvo iwe usiri kuda kuvaka-kweinokuvadza inoshatisa.
Iwe unozodawo kukwesha kutenderedza majoini avo kuti vhudzi rirambe riri munzvimbo idzodzo kubva pakuva rakakomberedzwa kana kusunganidzwa.
Tibetan Terriers ndeye hypoallergenic. Iwo akadzika mashedhedhi ayo anogadzira mashoma pet dander, zvinova ndizvo zvinokanganisa vazhinji vanorwara nehurwere.
Kuti iwe uchengetedze bhachi reumwe wako rakachena, ndinokurudzira kugeza kwevhiki.
Unogona kusundira iyo nguva kusvika kumazuva gumi ega ega, asi zvinobatsira mukutsvaira uye hutsanana kuzviita kazhinji.
Ndinokukurudzira kuti ubatanidze nzara dzadzo mavhiki maviri ega ega nemhando yepamusoro. Usaregeredze mazino avo zvakare. Iwe uchada kukwesha mazino avo nguva dzose kuti uchengete iwo anopenga ane hutano.
Kana iwe uchingoda kuziva nezve kuti zvinobatanidzwa sei kushambadzira imwe yeiyi imbwa inogona kuve, tarisa izvi kutsikisa vhidhiyo .
A TTs Chikafu Chinodiwa
Kudyisa yako TT inogona kuve iri nyore basa. Vanogona kutora kusvika kumakapu maviri echikafu pazuva, zvichienderana nesaizi yavo uye zera.
Ita shuwa yekuvapa yemhando yepamusoro imbwa chikafu neicho chaicho zvigadzirwa kubatsira kubatsira kusimudzira kwavo kwezviitiko mazinga.
Chimwe chinhu chikuru cheTibetan Terrier ndechekuti kazhinji havanyanye kudya. Rudzi urwu rwunozivikanwa kusiya chikafu mundiro yavo mushure mekudya izvo zvavanoda.
Nemhando ipi neipi, pane zvekudya zvausingafanire kuvapa. Iyo WebMD Pet Hutano Center inopa yakanakisa ruzivo nezve chikafu chine chepfu .
Ini ndinogara ndichikurudzira kutsvaga chikafu kana usina chokwadi kuti rega shamwari yako diki ive neimwe.
Tibetan Terriers ane akasiyana ehutano zvinodiwa. Kazhinji, kurasira kana kusachinjika kunogona kubatsira pazera diki, asi rudzi urwu runogona kutambura nemamiriro ezvinhu akabatana kana izvi zvikaitika.
Zvinokurudzirwa kuti kurasira kana neutering kuitike kana imbwa yako yasvika pakukura.
Nekuda kwejasi ravo rakasvibira, maTTs ane hunyanzvi kumatare. Iwe uchazoda kuve nechokwadi chekuenderera pamwe nekushambidzika kwavo uye nhata mishonga.
Imbwa yako painokwegura, iwe uchada kuongorora kune hutano hutano hwakadai segomarara, cataract, uye moyo kugunun'una. Imbwa yako inogona kukanganiswa nekumwe kunetseka kwehutano muhupenyu hwayo hwese.
Mamiriro Ehutano Anogona Kuitika:
Geriatric Moyo Kugunun'una
Matambudziko eziso / eyelash
Progressive Retinal Atrophy Rudzi rwechitatu (PRA-Typ3)
Lens yekutanga Kukwidziridzwa / Lens Kukwikwidza
Izvo zvinogona kutaridzika kunge zvakawanda zvehutano mamiriro, asi hapana yeaya anovimbiswa.
Iwe uchazoda kutevedzera kushanya kwese nachiremba wemhuka, uye kune bvunzo iyo vet yako inogona kumhanya kunoongorora kune aya matambudziko.
Kuyedza / Kuongorora Vet Yako Inogona Kuita:
PLL DNA Bvunzo
NCL DNA Bvunzo
Mamwe masangano anogona kubatsira nemiedzo iyi pamwe nekupa rumwe ruzivo.
Yunivhesiti yePennsylvania inopa PennHIP . Yake AIS PennHIP bvunzo ndeye inoshanda kwazvo kuongorora.
Iyo Orthopedic Foundation yeMhuka (OFA) inopa akati wandei masevhisi. Iyo OFA ine Companion Animal Eye Registry (CAER), uye iwe unogona kuwana ophthalmologist bvunzo kuburikidza nebasa ravo.
Ivo zvakare vanopa kuongororwa kwehudyu uye kuongorora kwekunzwa vachishandisa iyo BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) bvunzo.
Zvese izvi bvunzo uye kuongororwa zvinogona kuita sekuremedza, asi zvakakunakira mwana wako. Uyezve, kubata mamwe akaomesesa mamiriro pakutanga kuchabatsira imbwa yako mukugamuchira kurapwa.
Yako Tibetan Terrier ine tarisiro yehupenyu yemakore gumi nemashanu kusvika gumi neshanu. Nekutarisirwa kwakakodzera, mumwe wako achave padivi pako kwenguva yakareba.
Mutengo wembwanana weTibetan Terrier unogona kusiyana zvakanyanya. Mitengo inotangira pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora mazana maviri nemazana mashanu.
Mutengo wacho unogona zvakare kunge uri mucherechedzo wedzinza rembwa. Vavaki vemhando yepamusoro vanogara vachibhadharisa kupfuura zvitoro zvezvipfuyo uye mapurazi ehuku.
Nepo chitoro chechipfuwo kana purazi yembwanana ichange yakachipa, havafanirwe kuve yako yekutanga sarudzo. Mapurazi epurazi anotarisa pane purofiti pane kugara zvakanaka kwechipfuwo.
Mhuka dzinowanzove nedzimba dzisina kukwana, uye dzinogona kuve nematambudziko ehutano. Mapurazi epurazi haazoyedze magene mamiriro.
Iwe unoda mubatsiri anozivikanwa kana uchiwana Tibetan Terrier. Vanoyedza imbwa dzavo mamiriro ehutano, uye vanozopa yakanakisa mamiriro ehupenyu kumhuka dzavo.
Vabatsiri ava vanobatana nemasangano anochengetedza mhuka uku achisimudzira mwero wekubereka.
Mufudzi akavimbika anozove kumberi uye akatendeseka nezvembwa geni uye nhoroondo yekurapa.
Vachave nemitengo yakakwira, asi pamutengo iwoyo, urikuve nechokwadi chekuti unowana mwana akanakisa uye ane hutano zvakanyanya zvaunogona.
Paavhareji, iyo Tibetan Terrier ine vana vatanhatu mumarara avo, saka zvichienderana nemuberekesi, panogona kunge kusingave nevazhinji vekufamba.
Kubereka Imbwa Dzvene
Kana iwe uri mukuvhima kweye TT breeder, dzimwe nzvimbo dzinogona kubatsira mukutsvaga kwako.
Iyo Tibetan Terrier Kirabhu yeAmerica ine kodhi yetsika yevafudzi kutevedzera. Iyo TTCA zvakare ine chinyorwa che kuendesa vafudzi kuti vese vanotevedzera kodhi yavo yetsika.
Tichifunga nezvekuti pane vangangoita makumi maviri vafudzi pane avo runyorwa, hapana imwe nzvimbo iri nani yekutanga kutsvaga kwako.
IAmerican Kennel Club zvakare ine zviwanikwa zvekukubatsira iwe kuwana imbwa dziri kutengeswa .
Iyo AKC inotora izvo zvavanoita zvakakomba, uye imbwa dzese dzakanyorwa pane yavo saiti dzinobva kune vane hunhu hwakanaka, vazhinji vacho vachiuya kubva kushasha yeropa.
Ini ndinogara ndichikurudzira kutorwa nekuti kune imbwa dzakawanda kwazvo dzinoda imba ine rudo.
Nhau dzakanaka kune chero munhu ari mukutarisira kutora Tibetan Terrier ndeyekuti ivo rudzi runodiwa. Masangano mazhinji ari kubatsira kununura nekutsvaga dzimba dzevana ava.
Imwe yezvakanakisa zviwanikwa mune izvi kuita ichave Iyo Tibetan Terrier Kununura.
Ivo vanonyora imbwa dzinowanikwa chaidzo pane avo homepage , asi zvakare vane dhairekitori rekununura kubva kumativi ese United States nekune dzimwe nyika.
Iyo TTCA inogona zvakare kukubatsira iwe kununura mwana mudiki anoshaiwa. Ivo vanopa zviwanikwa zvekubatsira mukutsvaga kwako pane avo kununura peji , asi iwe uchafanirwa kutumira remibvunzo pamberi.
Imbwa dzeLhasa Apso idiki diki dzine makumbo mapfupi uye mapfupi emuromo.
Iyo Lhasa Apso neTibetan Terrier inogovera zvimwe zvakafanana. Ivo vaviri imbwa dzeTibetan dzine hunhu hwakafanana. Kunyanya kucherechedzwa, vanogona kuve shamwari dzakanaka kwazvo idzo dzinonyara.
Iyo Lhasa Apso zvakare ine yakafanana yakafanana jasi, iyo inogona kuvaita padhuze nedoppelganger yeTibetan Terriers.
Musiyano wekutanga waunogona kucherechedza ndewekuti Lhasa Apso idiki diki kana ichienzaniswa nehukuru hwepakati Tibetan Terrier.
Iwo maLhasa Apsos maficha madiki ane pachena mapfupi makumbo uye mupfupi tomu.
Tsoka dzeTibetan Terrier zvakare dzakakurumbira neakasiyana awo 'echando' emakumbo, iri hunhu iyo Lhasa Apso isingagovane.
Nepo marudzi ese ari maviri achinyara asi shamwari dzinodanana, anozosiyana pane zvido zveumwe neumwe sekudya uye kurovedza muviri nekuda kwehukuru.
Chero nzira, iwe unowana imbwa inogadzira inonakidza chipfuwo.
Dzinoverengeka dzinonakidza dzekuyambuka dzinoshandisa iyo Tibetan Terrier, senge iyo Kobetan uye Ttoodle. Ngationgororei musanganiswa uyu kuti tione zvinoita kuti zvive zvakasiyana.
Sangana naTanya, muKobetan. Mufananidzo sosi
Iyo Kobetan iyo yakakwira simba muchinjiko pakati peCocker Spaniel neTibetan Terrier. Ivo vanozoda chiyero chakaringana chekurovedza muviri, asi ivo vane yakanakisa mamiriro-akatarisana nemhuri.
Vanoita zvakanaka nevana vadiki nedzimwe mhuka dzinovaraidza, asi kushamwaridzana kwekutanga kunoshanda zvakanyanya.
Iyo Kobetan idiki kusvika kune yepakati-saizi imbwa ine yakaenzana kureba pakati pe14-16 inches uye inogona kuyera pakati pe22-27 mapaundi. Hembe yavo gobvu, wavy inoda kuchengetwa kwakafanana neTibetan Terrier.
Iyo Kobetan ine mukana wekudurura yakawanda, saka haisi hypoallergenic, asi inogona achiri mhuka yakanaka kune vamwe vanorwara nehutachiona.
Sangana naZoey, Ttoodle. Mufananidzo sosi
Iyo Chidimbu Muchinjikwa une rudo pakati peTibetan Terrier uye, kazhinji, Standard Poodle. Iwo ekuchengetedza kwakanyanya kana zvasvika pakushambidzika, asi iwo ari hypoallergenic.
Idzo imbwa dzemhuri dzakangwara dzinogona kunyara dzakatarisana nevasingazive. Kutanga kushamwaridzana kunobatsira nevasingazive uye nekugona kutonga nyaya nedzimwe mhuka.
Iyo Ttoodle musanganiswa wepakati nepakati uyo unomira pakati pe14-19 inches uye inorema pakati pe32-45 mapaundi.
Vanogona kuve zvine mwero nyore kudzidzisa, asi ivo vanowanzo tenderera kupatsanura kunetseka kana vakasiyiwa vega kwenguva refu.
Zvakanaka, kana iwe uchitsvaga iyo hypoallergenic imbwa ine yakadzikama simba nhanho, ivo iwe wakafukidza.
Ivo vakanaka shamwari uye imbwa dzemhuri dzinoenderana pamwe nedzimwe mhuka dzinovaraidza pavanenge vachishanda senge yakanakisa yekutarisa.
Kana iwe usingakwanise kutsaura iyo nguva inodikanwa kune yavo yekushambidzika uye kurovedza muviri, izvi zvinogona kunge zvisiri mwana wako.
Hunhu hwavo hwekusindimara uye hunowanzo nyara hunogona kusashandira vamwe vanhu, saka ita shuwa kuti hupenyu hwako hunosvota nezvavanoda.
Iyo Tibetan Terrier inogona kunge isiri iyo yakakodzerwa iwe, asi kana iwe uchiri kufarira imbwa dzakafanana, isu takuwana iwe wakafukidzwa. Inzwa wakasununguka kutarisa aya mamwe emhando kuti uone kana akakukodzera.
marudzi akasiyana egomba mabhuru
Pomeranian yakasanganiswa nehusky
mazita akanaka evakadzi vafudzi veGermany
white and tan german shepherd